सचेतनाका लागि पाँच पालिकामा सेना, झापा पनि निषेधाज्ञा - sailungonline
सचेतनाका लागि पाँच पालिकामा सेना, झापा पनि निषेधाज्ञा
१८ बैशाख २०७८, शनिबार ०९:५६ । झापा
कोभिड-१९ को संक्रमणविरुद्ध सचेतना फैलाउन जिल्लाको पाँच स्थानमा नेपाली सेनाको टोली परिचालन गरिएको छ ।
मेचीनगर र भद्रपुर नगरपालिकासहित कचनकबल, गौरीगञ्ज र झापा गाउँपालिकामा सेनाको टोली परिचालन गरिएको नेपाली सेनाका चारआलीस्थित श्रीनाथ गणका प्रमुख सेनानी अमरजङ्ग थापाले बताए । गत वर्षसमेत कोभिड-१९ को महामारी तीव्रगतिमा फैलिएका बेला नेपाली सेनाको टोली दक्षिण झापाको कचनकबल गाउँपालिकामा परिचालन गरिएको थियो ।
नेपाली सेनाले काँकडभिट्टा नाकामा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्न थालेको छ । श्रीनाथ गणबाट क्याप्टेन विजय निरौलाको कमाण्डमा गएको टोलीले काँकडभिट्टा खेलमैदानमा शुक्रबारदेखि होल्डिङ सेन्टरको पूर्वाधार निर्माणको काम शुरु गरेको हो ।
पहिलो दिन सेनाको टोलीले खेलमैदानको आधा भाग ओगट्ने गरी रेखांकन गरेको छ भने बाँसलगायत सामग्री किनेर घेराबेरा बनाउन थालेको छ । यहाँ एक हजार क्षमताको होल्डिङ सेन्टर बन्न लागेको हो ।
कोभिड-१९ संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्ररूपमा फैलिन थालेपछि सीमाबाट अवाञ्छित आवागमन हुन नदिन सशस्त्र प्रहरीले फरवार्ड पोस्ट स्थापना गरेको सूचना अधिकारी भण्डारीले बताए । झापाका सीमावर्ती क्षेत्रमा हाल १८ वटा बोर्डर आउट पोस्ट रहेका छन् । सशस्त्र प्रहरीको परिचालन र पोस्टको बढोत्तरीपछि सीमा क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षा व्यवस्था कसिलो भएको छ ।
कोभिड-१९ को बढ्दो संक्रमण रोक्न झापामा आइतबारदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिम्सिनाले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा अत्यावश्यक कामबाहेक सर्वसाधारणले घर बाहिर निस्कन नपाइने उल्लेख छ । आदेशमा हाटबजार, भेला, जुलुस, सभा, मेला, भोजभतेर आदि गर्न नपाइने भनिएको छ ।
निषेधाज्ञा आइतबार राति १२ बजेबाट शुरु हुने र बैशाख २६ गते राति १२ बजे समापन हुने भएको छ । सिनेमा हल, स्वीमिङ पुल, सामूहिक खेलकूद, पुस्तकालय, जिमखाना, पार्टीप्यालेस, सैलुन र ब्यूटीपार्लर सो अवधिमा बन्द गरिनुपर्ने निषेधाज्ञामा जनाइएको छ । निषेधाज्ञामा यातायातमा जोर बिजोर लगाउने र सरकारी कार्यालयसहित बैंक र वित्तीय संस्थामा आलोपालो प्रणाली लागू गराउने भनिएको छ । शुक्रबार कोभिड-१९ जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक बसेको थियो । बैठकलगत्तै निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो ।
सभामुखको नेगेटिभ रिपोर्ट
कोरोना नियन्त्रणका लागि जनचेतना अभियान
कवि तथा समालोचक मालीको निधन
१. चितवनका अधिकांश सङ्क्रमित भोजभतेरमा संलग्न
२. सभामुखको नेगेटिभ रिपोर्ट
३. कोभिड नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न कांग्रेसको माग
४. कोरोना नियन्त्रणका लागि जनचेतना अभियान
५. फरार प्रतिवादी पक्राउ
६. एकै दिन भारतमा झन्डै चार हजारको मृत्यु, चार लाख १२ हजार संक्रमित